Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna? - OROMO ICT
Abdisa Bencha Jara December 27, 2017
Ergaa(E-mail) sobaafi deetaa keenya basaasuu dhufu akkamitti Beekna? – OROMO ICT
Guyyaa guyyatti ergaalee(e-mails) garagaraa namoota nuti hin beekne irraa nutti dhufaa oolu.Ergaaleen kunneen caluma jedhamee osoo hin taane kaayyoo mataa isaa danda’e kan qabu yoo ta’u garuu Ergaaleen nutti dhufu hundi kan rakkoo qabu jechuun hin danda’amu.
Yeroo hedduu yakkamtootni Saayibarii(Cyber-Criminals) yeroo hedduu nama nu beekan fakkaatanii ykn dhaabbata nuti keessa hojjannu waan beekan of fakkeessanii sirna(system) keenya keessa seenuuf yaalu, yoo carraa argatanis kaayyoofi ergama qabatanii dhufan waan qabaniif ergama sana hojitti hiiku – innis Deetaa keenya ykn system keenya basaasuu, deetaa barbaadan qaama ergeef gabaasuudha.
Kanaafuu, Akkamitti beekuu dandeennaree? Mala kamiin ofirraa ittisnaree?
Tartiiba kurnan asiin gadii hordofaa.
1) Maqaa nama nutti ergee amanuu hin qabnu, Eessaa nuuf ergame qe’ee(domain) irraa nuuf ergame mirkaneeffannu malee banuun hin barbaachisu.
Fkn: qe’ee xxxx@secure.com jedhurraa yoo nuuf ergame, maqaan mallattoo ‘@’ booda jiru kun qe’ee ergaan irraa ergame waan agarsisuuf qe’ee hin beekne kana banuu hin qabnu – fakkeenni kun ergaa sobaati jechuudha.
2) Qe’ee Sobaa – Qe’een sobaa ergaa nuuf dhufu sana yoo banuuf yaallu qe’ee biraa hidhaa(link) nuuf dhufe sana osoo hin taane gara biraa nu erga, kanaafuu of qe’ee akkasii fayyadamuu hin qabnu.
3) Dogoggora Qubeeti – Dhaabbanni sirrii yeroo hundaa Sirna Tuqaalee seeraan kabajee fayyadama, kanaafuu ergaan barreeffama dogoggoraa qabu yoo isin mudate hin fayyadaminaa
4) Ergaalee Odeeffannoo dhuunfaa nu gafatan – Ergaalee Odeeffannoo dhuunfaa keessattuu odeeffannoo eenyummeessaa keenya kan baankii, Password keenyafi icciitii akkasii nu gaafataniif deebii kennuu hin qabnu.
5) Oduu Gammachiisaa osoo waa hin hojjatinii – Ergaaleen tokko tokko osoo nuti homaa hin hojjatin ykn dorgommii tokkollee hin dorgomin waan akkasii waan akkanaa moo’attanii waan jirtaniif jedhee Oduu Gammachiisaa fakkeessee osoo homaa hin hojjatin Odeeffannoo dhuunfaa ykn dhaabbata tokkoo ergaan nugaafatu hundinuu soba waan ta’eef irraa of qusachuu qabna.
6) Sodaachisuu – Email hattoota sobaarraa yeroo hedduu ergamu sodaachisoo of keessaa qabaachuu danda’a, kunis akka dhiphannee waan isaan barbaadan itti erginuuf nutti ergu. Fkn: Facebook keessan cufamuuf ta’a waan ta’eef hidhaa(link) kana tuquun Jecha darbii(password) jijjiiradhaa fikkf
7) Nagaa gaaffii walqabatee – Ergaan dhaabbata sirrii irraa dhufu Nagaa seeraan qindaayegaafachuu jalqaba, keessattuu Maqaa keessaniifi Abbaa keessanii bareessuudhaan jalqaba, yoo kana hin goone nama ykn system isin hin beeknetu isinitti ergaa akka jiru hubachuu qabdu.
8) Teessoo Qunnamtii dhabuu – Ergaaleen sobaa teessoo qunnamtii ykn Contacts isa jedhamu hin qaban, kanaafuu ergaan isaanii seera qabeessaa miti jechuudha.
9) Amanamummaa dhabuu – Yoo rakkoowwan asii olitti eerama hunda guuteyyuu yeroo hunda ija shakkiitiin ilaaluun faariidha. Yoo shakkii isinitti uume, dhaabbata sanaaf barreessitanii qulquleeffachuu ykn mirjaneeffachuun gaariidha.
PREVIOUS POST Previous post: Magaalaa Finfinneetiin ala, Mootummaan Tajaajila Interneetaa Kukkutuun maaliif?
NEXT POST Next post: Bilbila Ammayyaawaa – Smart Phones
(December 28, 2017 - 6:19 am)
baayyee galatoomii Abdii keenyaa
(January 12, 2018 - 11:52 am)
Baayyee namatti tola Abdi beekumsi ati nuuf qoodde ulfaadhu , ammallee beekaa ta’i nuuf buli.,
Maxxansaalee Haaraa: OROMO ICT… Information is Power (9,004)
Total Visit : 782265
Total Hits : 1138882